Golaha Shacabka BFS ayaa maanta fadhi ka leh saddex ajende sida ku cad warqadda Wargelinta ah ee loo diray Xildhibaannada si ay ugu sii diyaargaroobaan 24-saac kahor fadhigooda & qodobka horyaalla.
Kalfadhiga 7-aad oo dhamaaday horaantii bishaan Oktoobar 2020 ayuu sheegay Guddoomiye Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan in ay sii guda-galayaan kalfadhigooda 8-aad iyaga oo aan fasax gelin.
Sababtu waxa uu ku sheegay in waqtiga u haray laanta xeer dejinta oo sii idlaanaya & qodobo muhiim ah oo horyaalla, sidaas awgeed maalmihii fasaxa Baarlamaanka uu shaqeynayo, maadaama bilaha Nofeembar iyo Deseember dalka uu doorasho gelinayo.
Qodobada miiska saaran oo ay ka doodayaan Xildhibaannada ayaa kala ah:
Aqrinta 2-aad Hindise Sharciyeedka Adeegyada Baaritaanka Beeraha Soomaaliyeed oo ay horay u geliyeen Aqrinta 1-aad.
Aqrinta 2-aad Hindise Sharciyeedka Dhismaha Hay’adda Diiwaangalinta iyo Bixinta Aqoonsiyada Dadweynaha oo dood badan aqrinta 1-aad ka keeneen Xildhibaannada Aqalka shacabka.
U Codeyta W/B Sharciga Hanti-dhawraha Guud ee Dawladda.
Gudoomiyaha Golaha Shacabka BFS Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo labadiisa ku xigeen ayaa kulamo gaar ah ka yeeshay dadejinta Hindise sharciyeedyada horyaalla, maadaama Xildhibaannada ay dib ugu laabanayaan deegaan doorashadooda si ay u raadsadaan markale kuraasta ay ku fadhigaan 4-ta sano.
Previous articleSomaliland oo hakisay wada-Shaqeynta Hay’adaha Qaramada Midoobay
Next articleYaa ugu mudda dheer madaxda Xilalka soo qabtay 8-dii sano ee lasoo dhaafay?